Kooxda YALIS - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
1. Xiriirka suuqa: Kooxda YALIS R&D waa waaxda cilmi-baarista ee u heellan horumarinta muuqaalka, hal-abuurka qaab-dhismeedka, cilmi-baarista tignoolajiyada iyo xalalka alaabta kale.Waxaa jira 8-10 nashqado cusub oo u yimaada dadweynaha sannadkii.
2. Samee waxaad rabto habsocod kasta: laga bilaabo naqshadaynta qabyada ilaa daabacaadda 3D, qaabaynta, waxaanu hubinaynaa in nidaam kastaa uu abuuro qaabab iyo tixgelin.
Inta lagu jiro wax soo saarka iyo iibinta ka dib, waxaan si buuxda u daryeeleynaa nidaam kasta si aan u siino macaamiisheena alaabada iyo adeegyada ugu sarreeya.
Waax suuqgeyneed oo awood leh waxay kor u qaadaa ganacsiga shirkadda waxayna u horseedaa iibka alaabada, adeegyada, waxayna si adag u ilaalisaa xawaaraha suuqa iyo macaamiisha.YALIS ayaa leh.Waa da'yar oo xamaasad leh, oo suuqa kala socda waqti ka waqti.Iyada oo ku saleysan baahida suuqa, waxay bixiyaan xeeladaha horumarinta, iibinta & waaxaha wax soo saarka.Waxa kale oo ay bixiyaan caawimo jumladleydayada/wakiiladayada sidii ay si wanaagsan ugu shaqayn lahaayeen ganacsigooda.
Waaxda Iskaashiga Caalamiga
Waaxda iskaashiga caalamiga ah waxay diiradda saartaa la shaqaynta ciyaartoyga ugu sarreeya, oo ay ku jiraan qaybiyeyaasha ugu sarreeya, soo-saareyaasha albaabbada iyo qandaraaslayaasha suuqa iyo aagga kasta.Waxay bixiyaan talada ganacsiga, waxayna yihiin koox la isku halayn karo oo u qalanta iskaashiga horumarka mustaqbalka ee ganacsigaaga.
Waaxda Ilaalinta Tayada
Nidaam kasta waxaa si adag u xakameynaya Waaxdayada QC ee xoogga badan, YALIS waxay si dhow ula socotaa oo ay kormeertaa tayada inta lagu jiro habka wax soo saarka iyo habka xulashada alaab-qeybiyaha.Nidaam kasta ma ogola in alaab tayo xun lagu iibiyo suuqa.Dhammaan qalabyada muhiimka ah iyo qaybaha muhiimka ah ayaa mid mid loo eegayaa, si loo hubiyo in aanay si fiican u soconayn gacan-qabashadu marka la furayo ama la xirayo albaabka.